Imisebenzi Yezokuphatha e-Dubai C-Level hhayi kuphela nge-Expats
Le mininingwane izothunyelwa bukhoma kwiWebhusayithi yethu!
Amakhono & Ukufaneleka - Ihlukaniswe yiComma (umphathi, abathengisi, unjiniyela)
Lawa ngamagama akho abalulekile kuphrofayela, leyo ndlela abaqashi abazokuthola ngayo ku-inthanethi
Imisebenzi Yokuphatha kuDubai Umhlahlandlela Wokunakekela i-C-Level
Imisebenzi yabahlengikazi eDubai nase-Abu Dhabi
Kwangathi 6, 2018
Ibhulogi yase-Dubai yokuthengiswa okusha e-Dubai
Kwangathi 16, 2018
Vimba Ukungena okuphindwe kabili
Thumela i-CV yakho bese uzethula ngobuchwepheshe kwizimo ezahlukahlukene.
Izikhundla zobungcweti [Zamanje & Ezifiswayo]
Yini Oyifunayo Esikhundleni Esisha?
Bhala Isipiliyoni Sakho noma Kopisha i-CV lapha!
Amagama agqamile ukukuthola: Hlukanisa umaki ngo-comma!
Ngibheke ukuba yi-Expat
Imisebenzi yokuphatha e-Dubai
Imisebenzi yokuphatha e-Dubai hhayi nje kuphela yezidingo. I-Dubai City Company manje ukusiza abaphathi ukuthi babekwe e-UAE. Iqembu lethu liphathe yonke imihlahlandlela yemisebenzi eDubai yabaphathi. Ikakhulu abaphathi abaphezulu. Ngakho uma ufuna umsebenzi omuhle e-United Arab Emirates. Bheka amathiphu ambalwa, bese uthola ukuthi iyiphi indawo enhle kunazo zonke ukuthola umsebenzi wephupho phesheya.
Sibhale phansi imisebenzi engcono kakhulu ongayithola ku-UAE. Futhi-ke, okungcono kakhulu kukhona I-CEO noma amathuba omsebenzi wokuphatha abaphathi. Futhi inkomba yethu yenkampani idlulisela ukuthi uluthola kanjani lolo hlobo lwemisebenzi olunikezwayo. Ngokwesinye isandla, mhlobo muni lowo msebenzi?. Futhi ungayiphatha kanjani ingqondo ephelele yale misebenzi enikezwayo? I-Duba City City isebenza abafuna umsebenzi omusha. Kungani ungafundi umhlahlandlela wethu. Ungathola izinkampani ezinhle ngezansi. Benza imisebenzi emihle e Dubai naseGulf Countries.
Inkampani yethu ibukeka ikhuluma nayo njalo sikusize ube umphathi omkhulu ku-UAE. Ngakolunye uhlangothi, sisiza abokufika ekutholeni umsebenzi ngokushesha okukhulu abacabanga ngakho. Ngalesi siqondisi, uzokwazi thola ulwazi oluhle mayelana nokuqashwa. Okwamanje iMpumalanga Ephakathi kanye namazwe aseGulf kukhona indawo ephezulu yokufuna umsebenzi. Ikakhulu nabaphathi abafundile abane-MBA nemfundo yokuphatha ibhizinisi. Ngakho-ke bheka ukubheka ngezansi, ini ungenza umhlahlandlela wethu.
Umsebenzi we-CEO e-Dubai
Ukuba nesikhundla esiphakeme ngaso sonke isikhathi kube ngcono. Isikhundla se-CEO uthando, akuwona umsebenzi. Lokho impela yingxoxo yokuba ngumphathi omkhulu noma cha? Iningi labaphathi abasezingeni eliphakathi banquma ukuthi ukuphishekela umsebenzi kumphathi omkhulu we-leve isikhundlal. Imisebenzi ye-CEO inhle kubantu abanezemfundo ye-MBA nalabo abane-PhD. Ngenxa yezinkampani ezinkulu noma ezinkampani ezincane. Ngokuqinisekile bonke abane-CEO. Ngakho inkampani ephakathi nentshisekelo ilindele abaphathi abaphezulu ngaphezulu. Ayikho yonke indawo iqiniso kule-Dubai blog, futhi abantu abakaze bazi ukuthi ngubani ozoba umholi ongcono.
Isibonelo, abathumbi abaningana baseMpumalanga Ephakathi benza ucwaningo futhi hlola umholo we-CEO e-Dubai. Ngabe iholo elikhulu lihlala lingcono? Yebo kunjalo ngoba wenza ingxoxo okufanele ibe nayo uma kufikwa ekunqumeni ukuthi ukuphishekela umsebenzi enkampanini enkulu noma enhlanganweni encane noma ephakathi. Umsebenzi we-CEO kunzima ukuwufinyelela, ngaphansi kwe-5% yabantu abalawulayo ukwenza lokhu.
Akukho iqiniso eliphelele emhlabeni jikelele mayelana nesimo se-CEO. Futhi kunezinzuzo nezinkinga zokukhetha kusukela kubasebenzi abahlengikazi kuze kube sezingeni eliphezulu. Isikhathi eside somsebenzi, okhethekile ngokomzimba futhi kudingeka ubuhlakani bezenhlalo. Ngakho-ke akuwona wonke umuntu ongaba yimenenja ephezulu. Ikakhulu uma kungenjalo unobhala obhalwe phansi kahle. Kukhona isibindi nesifiso esidingekayo kule ndawo ehlukile. Iningi labantu likhuphukela emazingeni omphathi ophakathi.
Kungani Imisebenzi Yokuphatha Dubai?
Imisebenzi yokuphathwa kwe-1 e-Dubayi i-Positives
Imisebenzi yokuphatha, empeleni, iningi ezinkampanini ezinkulu kusuka e-Abu Dhabi kuya e-Dubai. Futhi iningi labo likhona ngesizathu. Ngokuphumelela ukukhula nokukhula, abaphathi abaphakathi. Ukuthola umsebenzi njengabaphathi abaphezulu. Futhi ngale nkampani encane iba isikhulu ngaphezulu kwesikhathi. Futhi abaphathi bathola okuhlukile izinzuzo kanye nezindleko kumakethe emisebenzi yokuphepha.
I-Dubai City Company enezincazelo eziningi isiqondiso sezindleko ze-Algeria. Sibeke izikhala ezimbalwa okufanele sizicabangele ngokulandela umsebenzi njengomphathi kwisikhundla semenenja ephezulu. Okusemqoka emisebenzini yokuphatha eDubai kukhona ukuthola isipiliyoni sezinga eliphezulu. Ungayisebenzisa okuhlangenwe nakho kwakho okuhle ekusetshenzisweni komsebenzi esikhathini esizayo.
Izindlela eziyinhloko mayelana nemisebenzi yokuphatha e Dubai ziyinkokhelo emihle. Futhi ngaphezulu kwalokho kuzo izifundo ezinhle futhi uphawu oluhle lomuntu siqu njenge-expat. Ngakho-ke, uma ufuna lowo hlobo lomsebenzi kufanele ukwazi ukuthola amabhonasi amaningi. Njengo-CEO, uzothola ihora elide lomsebenzi kepha ungaphatha ukuxhumana okuhle. Kusuka emisebenzini eyisisekelo yemisebenzi efana umsebenzi wehhotela kuya ku Umsebenzi we-MBA e-UAE. Bonke bazokwazi ukuthola uMphathi weMpumalanga Ephakathi.
Isakhiwo Sobuholi se-No.2 njenge Umphathi e-Dubai
Ukufaka inkampani enkulu emsebenzini wokuphatha, isibonelo, Imisebenzi yezindiza e-Abu Dhabi nase Dubai. Ngokuqinisekile kufana nokuba yingxenye yomshini omkhulu osebenzayo ohambisane nokuhlolwa kwesikhathi. Empeleni ukuthola umsebenzi wokuphatha e Dubai. Kuzothatha isikhathi eside. Ngenxa yalesi sizathu, ithimba lethu linalo ukuqondisa izifiki ezintsha. Iningi labaphathi abaphezulu labaphathi livame ukusekwa isikhathi eside ngaphambili.
Ukuze ube ngumphathi eDubai. Kufanele ufinyelele kwezinye izindlela. Futhi izinto ezikwenza ukwazi ukuthi yini umsebenzi wakho oyikho, ukuthi ungafanelana kanjani nomsebenzi emnyangweni wakho kanye nezindlela ezicacile zokukhushulwa futhi zivusa ngokushesha uma uhamba ngomnyango. Nakuba lolu hlobo lwesakhiwo akuyona indlela efanele wonke umuntu, uma ufuna umsebenzi ngomqondo okhuphukile wokuzinza, izindlela ezichazwe ngokucacile futhi ezihlelekile zokuthuthukiswa, ke izinkampani ezinkulu babe nalezi zikhathi.
Futhi, yi-expat, Owesifazane manje uthola imisebenzi e-Dubai. Kungakhathaliseki ukuthi uphila kanjani. Ngokuqinisekile uzoba nethuba elikhulu ukuthola umsebenzi eMpumalanga Ephakathi.
Izinzuzo ze-3 Zokuba Umphathi E-UAE
Ngokuvamile, izinkampani ezinkulu zivame ukuphakamisa imali yokutshala izimali. Ngakho kukhona ithuba elikhulu kubaphathi abasha abaphakathi. Okuyinhloko izinzuzo zokuba umphathi e-UAE ukuvezwa komhlaba wonke. Ngoba izinkampani zomhlaba ezingcono zinikezela ngezinzuzo ezifana nomshuwalense wezempilo. Kunwetshiwe okuningi nokunentshisekelo kwangaphakathi ukuqeqeshwa kwabantu abasha.
Njengomphathi omkhulu, uzokwenza thola izimpahla zokuhamba noma u-Uber. Ngaphezu kwaleyo bhajethi yokuqeqesha, nezinye izinzuzo eziningi. Lokhu kungenxa yokuthi izinkampani ezinkulu zivame ukuthola inzuzo enkulu kunamafemu amancane. Ngakho ngalokhu engqondweni, izinkampani zenza kulula kubasebenzi abasha ukuba ngumphathi. Ngakolunye uhlangothi, awudingi ukukhokhela ukukhokhela amaphakheji ezinzuzo andayo.
Yiqiniso, lokhu kuyindaba kuphela lapho uqala ukusebenzisa ngokunenzuzo isikhundla sakho. Kuningi olutholakalayo izinzuzo kubaphathi bebhange e-UAE. Kungakhathaliseki ukuthi iyiphi inkampani nokuthi yikuphi okungekho ngaphakathi noma kwangaphakathi ogcina ukuphuma impilo yakho ngemisebenzi yezinga le-C. Kufanele sikhumbule ukuthi abaphathi e-UAE. Ngokuqinisekile ungathola umsebenzi kwezinye izindawo, isibonelo, Saudi Arabia, naseQatar. Ngakho-ke njengoba waba yisikhulu eDubai noma ku-Abu Dhabi. The umhlaba uzovulelwa.
No.4 Kungenzeka Kakhulu Kokushintsha Kwemisebenzi
Nakuba indima yakho ingase ibe nezinkampani eziqondile kakhulu enkampanini enkulu. Ukufuna umsebenzi njenge-CEO noma uMqondisi wezokuphatha kungathatha isikhathi. Empeleni, kulula kakhulu ukuguqula isikhundla kusuka ezingeni lokuphatha. Ngakolunye uhlangothi iningi labaphathi abaphakathi babheke hlola izindawo ezintsha zomsebenzi ngaphandle kokushiya ngokuphelele inkampani. Unalokhu engqondweni, wena njengesisebenzi uzoba nokuningi kakhulu ukuthi kungenzeka ushintsho lomsebenzi.
Ukuze abe CEO, ungahamba ekubeni ngumphathi wokuthengisa ukuze ube umphathi wephrojekthi, bese usebenza umqondisi futhi afike emisebenzini yeC-Level. Noma ngisho ungaqala njengomklami wemifanekiso bese uvuka esebenza njengomthengisi omkhulu. Kungenzeka usadingeka ukuzingela kancane ushintsho lomsebenzi. Futhi usebenze kanzima ukuze uthole indawo ephansi iminyaka eminingi.
Ngenxa yokufanelekela ushintsho lomsebenzi owufunayo. Ezimweni eziningi kuzothatha indawo ubuncane beminyaka ye-10 yokufinyelela. Kepha-ke yi-plus uma usuvele usebenzela inhlangano enhle. Kunokwenyuselwa ukuphathwa imisebenzi e-Dubai. Leyo yinto eyodwa umphathi omuhle kakhulu angakhathazeka ngayo. Ngakolunye uhlangothi, imisebenzi yokuphatha eDubai ingaphezu kwemisebenzi elula.
Izinkampani ezintsha ze-5 kanye nokuqala
Ukusebenzela inkampani enkulu akusikho konke ukukhanya kwelanga nemicibisholo. Kodwa-ke, ukusebenzela izinkampani zokuqala kunezinzuzo zazo. Ngokwesibonelo, njengoba ususa inkampani yase-Dubai kusukela kwindawo yokuqala-up kuze kube ibhizinisi elihle. Uzoba nokulawula okugcwele njenge-executive ukuthi inkampani iqhubeka kanjani. Iyini ukuqhubeka komnyango ngamunye? Futhi ngisho nangakanani abasebenzi bakho abenza inyanga ngayinye.
Ngenkathi ungalingwa ukungena enkampanini enkulu yamazwe amaningi. Kufanele ucabangele lezi zinkampani ezincane. Noma izinhlangano zokuqala noma izinkampani zokutshala imali zenkampani. Inkampani enhle kunazo zonke ngokuthola umsebenzi nezinkampani zokuqalisa njengomphathi ngu-Angel.co. Le nkampani iqasha emhlabeni jikelele !.
Ama-6 C-Level Izinguquko zenzeka kancane
Ngibheke phambili ekubeni ngumphathi we-C-Level ?. Ukusebenza inkampani enkulu kuhle. Ohlangothini olubi, kusuka ezingeni eliphakathi kuya ku I-C-level yindlela ende. Ngoba abaphathi be-C-Level izinguquko zinde kakhulu. Udinga ukubekezela, ezinye izinqumo zithatha isikhathi esifinyelela ku-3 iminyaka. Noma nabanye izinkampani eDubai. Kusesekude ngaphambi kwezidingo noma abasebenzi basekhaya ukuqala ezingeni lokuphatha e-UAE.
Noma inkampani oyisebenzelayo ivulekele imibono emisha. Noma kunjalo, udinga ukuba nezinhloso zesikhathi eside. Kakhulu umsebenzi omuhle oqhubekayo kanye nokuqinisekisa ukuthi umnyango webhodi labaphathi bakwa-HR uhambise imodeli ehlukile. Futhi ulandele ukulandela isu elisha. Futhi shintsha isikhundla sakho for level C-level executive, ukukhuthazwa okusha kwesimo esisha kungathatha isikhathi esiningi. Eziningi zezindleko ezintsha ku-United Arab Emirates bazofuna ukushiya uphawu lwabo enkampanini. Kodwa lokhu kuthatha isikhathi esiningi, basebenzela ubuncane be-5 kuze kube yi-7 iminyaka.
Noma kunjalo, lokhu kungenzeka qina futhi kube lula kwinkampani encane ukwedlula enkulu. Kufanele ukhumbule ukuthi njengoba le nkampani ibikhona isikhashana, izoba nendlela yayo yokwenza izinto. Futhi nje ukusheshisa yonke inqubo ongayenza bheka ukuhamba ekuxoxweni ku-Dubai.
Abaphathi be-7 bathinta Impumelelo Yakho
Yebo, abaphathi bahlale belindele ukuba nethonya. Ngesikhathi uzungezile nawe abantu abavela emhlabeni wonke. Enye i-influencer kukusiza ngokuqinisekile uthole impumelelo yakho. Inkinga enkulu ukuthi eyakho isisusa sempumelelo nenjabulo. Awusoze wazi ukuthi kuzobanzima kangakanani ukugcina ibhalansi yempilo yomsebenzi isezingeni elihle. Ngasohlangothini olubi akubona bonke abaphathi eDubai abangaba bazimisele ukuthola imisebenzi ye-CEO. Abanye abantu basebenza isikhathi eside neqembu elingasebenzi kahle. Futhi bakhokha inani elikhulu. Ngoba lolu hlobo lwezimo zengqondo yehlisela phansi ikhwalithi yabasebenzi bakho.
Kusukela uqala ukusebenza nabantu abanesimo sengqondo esibi. Ngokuqinisekile ufake amahora amaningi kungakhathaliseki ukuthi ukhona ukuthi kunzima kangakanani ukusebenza. Kepha wena njengomphathi eDubai udinga ukuba yithonya futhi ube nelakho ikusasa lakho. Nakanjani, lokho kuzothinta amathuba akho okuthuthukela ngaphakathi enkampanini. Hlanganisa umbiko omuhle neqembu. Bacele bakhulise isimilo somsebenzi nokuzikhandla ngoba kubaluleke kakhulu. Impela, uma wenza umsebenzi wakho wesikole. Iqembu lakho noma umnyango ongaphansi kokugada kwakho. Izokukhulisa futhi ingangehlisi nganoma yisiphi isikhathi.
Kuningi olutholakalayo imisebenzi e Dubai nase-Abu Dhabi. Ukuthonyama amandla kungakusiza ekutholeni umsebenzi omuhle. Ukuphatha impumelelo yakho kungokoqobo konke kuthinta omunye umuntu ukuthi akuqashe.
Isiphetho Imisebenzi Yokuphatha e-Dubai
Ok, asiqede, imisebenzi yokuphatha e-Dubai. Akuzona lokho okulula ukuthola. Iningi labo abafuna umsebenzi kudingeka libe nekhono elifanele. Futhi emisebenzini ye-C-Level njengoMphathi we-Operation, i-CEO, abaphathi bezokuphatha. Izingxoxo eziyinkimbinkimbi kakhulu. Futhi ukuguqula imvelo akukaze kube lula kangako. Ngisho nokushintsha izwe kungaba ngumsebenzi onzima kakhulu ukuthi ngeke uphathe ngendlela evumayo. Ikakhulu kusuka eYurophu or I-Asia njengomhloli womsebenzi eMpumalanga Ephakathi.
Ngakho-ke, kungcono kakhulu ukuqala izikhundla zokungena ezingeni eliphezulu. Ngemuva kwalokho uqhubekela phambili kancane phambili isikhundla somphathi ophakathi. Ngale ndlela kuzovikeleka kakhulu kuwe. Vele ezinkampanini ezinjengeGoogle ne-Facebook. Ngokuvamile, ngemuva kokuphasa inqubo yezingxoxo, nokuthi uzoba njalo abamiselwe umsebenzi onjabulo. Uzokwenza imali eningi. Kepha ukufika lapho kunzima, yingakho iningi labantu lihlala sebenza baze bakhuthazwe.
Kepha Inkampani yaseDubai City uhlala ekhuthaza abaphambukeli. Sifuna ubekelwe imisebenzi engcono kakhulu ongayinikeza nemisebenzi yokuphatha engcono kakhulu eDubai. Yingakho sihlala sibuyekeza okuthunyelwe kwethu kwebhulogi e-UAE. Futhi ngalokhu engqondweni, siyazama ukukusiza ukuba ube umqashi ojabulayo eMpumalanga Ephakathi. Ngakolunye uhlangothi, ungakhohlwa ukuthi nezinkampani ngaphakathi I-Saudi Arabia ukuqasha izidingo.
Futhi Hlola Kuzo: Ama-Guides Olimi Lwemilayezo ye-Expats
Inkampani yaseDubai City manje ukuhlinzeka ngemikhombandlela emihle eDubai. Ithimba lethu linqume ukwengeza ulwazi ngolunye ulimi lwethu I-Dubay expats. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, manje ungathola izinkomba, amathiphu nomsebenzi e-United Arab Emirates ngolimi lwakho.
Bhalisa mahhala nge-Bayt!
Thola Umsebenzi Ongcono!
Chofoza lapha ukuze uthumele i-CV Mahhala! 📁
Thumela i-Article & Xhumanisa nathi!